Mid kamid ah Wadamada Islaamka oo laga mamnuucay Xuska Maalinta Jaceylka!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Mid kamid ah Wadamada Islaamka oo laga mamnuucay Xuska Maalinta Jaceylka!!
Mid kamid ah Wadamada Islaamka oo laga mamnuucay Xuska Maalinta Jaceylka!!
Maalinta Jaceylka Aduunka oo ah maalin ay inta badan xusaan dadna aan muslimka aheyn ayaa mudooyinkan kusoo badanayay Caruur yar yar oo wadamada Islaamka ah, waxaana xuskaasi ka qeyb galayay dhalinyaro Muslimiin ah ay ku jiraan kuwa Soomaali ah kuwaas oo ubadan Dumar lasiray iyo wiilala Dhalin yaro ah.
Previous PostMadaxweyne Farmaajo oo magacaabaya xilalkii u horeeyay ee Madaxtooyada Qaranka Soomaaliya!! Next PostDAAWO MUUQAAL Sir culus ah oo kusaabsan shirqool lagu dili rabo Madaxweyne Farmaajo!